ဂျက်ဖ် ဘေးဇို့စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
Amazon.com. ဝက်ဆိုဒ် ကုမ္ပဏီကြီး၏ တည်ထောင်သူဖြစ်သော ဥက္ကဋ္ဌ ၊ စီအီးအို နှင့် သဘာပတိဖြစ်သူ ဂျက်ဖ်ရီ ပရက်စတန် ဂျက်ဖ် ဘေးဇို့စ် ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ပရင်စတန် တက္ကသိုလ် ၏ Tau Beta Pi ဘွဲ့ရ ဘေးဇို့စ် သည် Amazon ကို မတည်ထောင်မီ စီမံ ၊ ဘဏ်ဏ္ဍာ စိစစ်ရေးမှူး အဖြစ် D. E. Shaw & Co ကုမ္ပဏီတွင် ၁၉၉၄ခုနှစ် အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
မွေးသက္ကရာဇ် ဇန်နဝါရီ ၁၂၊ ၁၉၆၄ (၅၅) နှစ်
အလုပ်အကိုင် Amazon ၏ဥက္ကဋ္ဌ
ကြွယ်ဝမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၄ ဘီလျံ (၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ)
အလေး ၄ ဦး
ကြင်ဖော် MacKenzie Tuttle (၂၀၁၉ ကွာရှင်းပြတ်စဲ)
ဆု Time Person of the Year 1999 Washington Ceo Person of The Year at the same time
၁ ငယ်ဘဝနှင့် နောက်ခံမိသားစု
ဘေးဇို့စ်၏ အမေဘက်က ဘိုးဘေးဘီဘင်များသည် Texas တက်(စ)ဆက်ပြည်နယ် တွင် အခြေချနေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။ ကော်ကျူလာ Cotulla ဒေသတွင် မျိုး ရိုးစဉ်ဆက် မြေ ၂၅,၀၀ဝ ဧက (၃၉မိုင်ခန့်) အကျယ်ရှိ (နွား)မွေးမြူရေးခြံကြီး များပိုင်ဆိုင်သည်။ ဘေးဇို့စ်၏ (မိခင်၏ အဖေ) အဖိုးသည် Albuquerque မှ အမေရိကန် အနူမြူစွမ်းအင် ကော်မရှင်၏ ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး လည်း ဖြစ်သည်။ အဖိုးဖြစ်သူသည် အငြိမ်းစား ယူပြီးနောက် မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဘေးဇို့စ် လူငယ်ဘဝ၏ နွေရာသီအချိန်များတွင် သူ၏အဖိုးနှင့်အတူ ကြီးမား များပြားလှစွာသော စီမံခန့်ခွဲရေးများ လုပ်ကိုင်ရင်း ကုန်လွန်ခဲ့သည်။ လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် သူ၏ ကလေးကုတင် ကို ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ဖြုတ်ရန် ကြီးစားသည်ကိုထောက်ရှူ၍ ဘေးဇို့စ်၏စက်မှူပိုင်းဆိုင်ရာသင်လွယ်တတ်လွယ်မှူ ပါရမီကို ခန့်မှန်း နိုင်သည်။
မိခင်ဖြစ်သူ ဂျက်ကီ သည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ကပင် နယူးမက်စီကို ရှိ အယ်ဘူကာကွေး အရပ်တွင် ဘေးဇို့စ် ကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ကျော်ခန့်အကြာတွင် သူမ ၏ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲခဲ့သည်။ သားဖြစ်သူ ဂျက်ဖ် ငါးနှစ်သားအရွယ်တွင် မင်ကွယ် ဘေးဇို့စ် ဆိုသူနှင့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။ ကျူးဘားတွင်မွေးဖွားခဲ့သူ မင်ကွယ် သည် အသက် ၁၅ နှစ်သားအရွယ်ကပင် အမေရိကသို့ ပြောင်းရွေ့အခြေချ လုပ်ကိုင်ပြီး အယ်ဘာကွေး တက္ကသိုလ် ကိုလည်း တတ် ရောက်ခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက် သူတို့မိသားစုသည် တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိ ဟိုစတန်မြို့သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ မင်ကွယ်သည် အိစ်အွန် ကုမ္ပဏီ၏ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂျက်ကိုယ်တိုင်သည်လည်း 4th grade မှ 6th grade အထိ ရေးဗား အုပ်စ် မူလတန်း ကျောင်းတွင် တတ်ရောက်ခဲ့သည်။ ကလေးအရွယ်ကပင် ဘေးဇို့စ် က သိပ်ပံပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် စိတ်အားထက်သန် ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရန်အတွက် သူ၏ ညီငယ် အခန်းထဲဝင်ရောက်မလာစေရန် လျှပ်စစ် အချက်ပေးကိရိယာကို သူ့ဘာသာတပ်ဆင်ခဲ့သည်။
သိပ္ပံဆိုင်ရာ စူးစမ်းမှူများ လုပ်နိုင်ရန် မိဘ၏ ဂိုဒေါင်ကိုလည်း သူ၏ သိပ္ပံစမ်းသပ်ခန်း အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူတို့မိသားစု မိုင်ယာမီသို့ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုအရပ်တွင် ဘေးဇို့စ် က မိုင်ယာမီ ပယ်မက်တို အထက်တန်းကျောင်းသို့ တတ်ရောက်ခဲ့ သည်။ အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ကပင် Florida တက္ကသိုလ်တွင်(ကျောင်းသားအဆင့်) သိပ်ပံဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှူ သင်တန်း ကို တတ်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့တတ်ရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် Silver Knight ဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် ပရင်စတန် တက္ကသိုလ်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရပြီး ရူပဗေဒပညာရပ်ကို လေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော် မကြာမီပင် ကွန်ပြူတာနယ်ပင်သို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ပြီး summa cum laude, Phi Beta Kappa with Bachelor of Science degree in computer science နှင့် electrical engineering ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ Bezos was awarded an honorary doctorate in Science and Technology from Carnegie Mellon University in 2008. ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကာနက်ဂျီ မယ်လွန် တက္ကသိုလ် မှ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူ ဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ပရင့်စတန်မှ ဘွဲ့ရပြီးနောက် ဘေးဇို့စ် သည် Wall Street တွင် ကွန်ပြူတာနယ်ပယ်၌လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးနောက် Fitel အမည်ရှိ ကုမ္ပဏီ ၏ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျာတွင် အသုံးပြုသော network ပိုင်းဆိုင်ရာကို တာဝန်ယူပြီး အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ဘီဇို့စ် သည် Bankers Trust ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ရင်း ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ D. E. Shaw & Co. ကုမ္ပဏီအတွက် လည်း computer science ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် Amazon.com ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Amazon စီးပွားရေး စီမံကိန်း ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နယူးယောက်မှ ဆီတယ် အထိ သူ၏ လုပ်ငန်းများကို လွမ်းခြုံမှု ရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Amazon လုပ်ငန်း အစီအစဉ်ကို လမ်းသွားနေရင်းနှင့် ရေးနေခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း စတင် အကောင်အထည်ဖော် တော့ သူ၏ မူရင်းကုမ္ပဏီ ဂိုဒေါင်ကလေး တွင် ဖြစ်သည်။
သူသည် Amazon ကို ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့် အောင်မြင်လာပြီးနောက် ထင်ရှားမှူ အရှိဆုံး စွန့်ဦးတီထွင်သူ ဘီလျံနာ တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် human spaceflight များလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Blue Origin ကုမ္ပဏီ ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘီဇို့စ် သည် သူ၏စီးပွားရေး လုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်လျှင် လွန်စွာ ဂရုစိုက်သူဖြစ်သည်။
Condé Nast's Portfolio.com ၏ ဖော်ပြချက်အရ သူသည် ပျော်ပျော်နေတတ်သော သူဖြစ်သော်လည်း အလုပ်နှင့် ပတ်သက်လျှင် လောဘဇောကြီးသည့်နေရာတွင်နာမည်ဆိုးသော စာအုပ်ဆန်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ စေ့စပ်သေချာလွန်းသည့် နေရာတွင် သူထုတ်ဝေသည့် Amazon တွင်ဖော်ပြထားသည့်အကြောင်အရာများကို တစ်ခုမကျန်သိရှိ နိုင်အောင် လွန်စွာသေးငယ်သည့် အချက်အလက်လေးများက အစ ဂရုစိုက်ကြည့်ရှု လေ့ ရှိသည်။
Artificial Artificial Intelligence (AAI) ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်း ကို Artificial Intelligence (AI) ကို ကိုးကားပြီး ဂျက်ဖ် ဘေးဇို့စ် တီထွင်ခဲ့သည်။ ပမာ ဆိုရသော် ဓာတ်ပုံထဲမှ လူတစ်ဦးကို ယောက်ျား ၊ မိန်းမ အဖြစ် ခွဲခြားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထို သို့လုပ်ဆောင်မှု သည် ကွန်ပြူတာထက် လူသားများက ပိုမို မြန်ဆန် မှန်ကန်နေဆဲဖြစ်သည်။ Artificial Intelligence (AI) သည် အဆိုပါ လုပ်ဆောင်မှူ ကို မှန်ကန်ပြည့်စုံအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ချေ ။ Artificial Artificial Intelligence (AAI) ကမူ အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ (AAI) သည် Amazon Mechanical Turk ၏ စည်းမျဉ်းများကို ကို ပိုမို ထင်ရှားစေရန် အတွက်လည်းဖြစ်သည်။
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း ၏ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အတွက် Person of the Year အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်၏ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအဖြစ် U.S. News & World Report အဖွဲ့ကြီးမှ ရွေးချယ် ခြင်းခံရသည်။
↑ "#1 Jeff Bezos"။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျက်ဖ်_ဘေးဇို့စ်&oldid=719143" မှ ရယူရန်
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။